Ruka Kuukkeli, igumbi elinye lokulala + kwigumbi eliphezulu - I-Airbnb
Ruka Kuukkeli, igumbi elinye lokulala + kwigumbi eliphezulu
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguJuho
Indlu epholileyo yendlu eyenziwe ngezigodo. Ngaphantsi kwe-45 square metres kunye ne-loft kunye ne-8 ye-square metres ezongezelelweyo. Le ndlu ikwanebalcony ebanzi. Kukho iindawo zokulala ukuya kwiindwendwe ezintandathu.
Le ndlu ikwindawo yokuhlala ebizwa ngokuba nguRuka Kuukkeli. Iziko limalunga neekhilomitha ezi-2 ngemoto kunye nomgama omncinci wokuhamba. I-ski slope ekufutshane imalunga ne-1 km kude. Iindlela zokutyibiliza kunye neendledlana zeemoto zekhephu zishiya kufutshane nekona.
Indlu isebenza kakuhle kwiindwendwe ezi-1-4. Iibhedi ezimbini ezongezelelweyo zinokwenzeka kwi-sofa yegumbi lokuhlala.
4.49 · Izimvo eziyi-72
Lo mhlaba umi malunga neekhilomitha ezi-2 ukusuka kumbindi weRuka. I-ski slope ekufutshane imalunga ne-1 km kude. Ivenkile ikumgama weemitha ezingama-800 kwaye i-skibus ihamba kanye ecaleni kwendlu. Iindlela zokutyibiliza kunye neendledlana zeemoto zekhephu zishiya kufutshane nekona.
Umbuki zindwendwe ngu- Juho
Eyona ndlela ingcono yokufikelela kuthi kukuthumela umyalezo. Siya kuhlala siphendula ngokukhawuleza.